Top Maqal: Maamulka Shiirkada DAALLO oo Xog Cusub ka bixiyay Qaraxa Diyaarada ka dhacay.. - iftineducation.com
Top Maqal: Maamulka Shiirkada DAALLO oo Xog Cusub ka bixiyay Qaraxa Diyaarada ka dhacay..
iftineducation.com – Agaasimaha Guud ee Shirkadda Daallo Airlines, Maxamed Ibraahim Colaad oo ku sugan magaalada Dubai ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta ayaa maanta ka hadlay Qaraxii Talaadadii ka dhacay mid ka mid ah Diyaaradaha Shirkaddooda u kireysan oo nooceedu ahaa A321, Taasoo si deg-deg ah ugu soo laabatay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Colaad oo u Waramayay BBC-da ayaa sheegay in baaritaanku uu weli socdo isla markaana ay ka War-sugayaan warbixinta ay Hay’adda Duulista Hawada Somalia, wuxuuna xusay in warbixinta ay kusoo bixi doonto muddo laba maalmood gudahood ah, baarista socotana ay caddeyn doonto shilkii dhacay wuxuu ahaa.
“Baaritaanka Qaraxii Diyaaraddeenna ka dhacay weli wuu socdaa, meel wanaagsan ayuuna marayaa, welina go’aan kama dambeys ah lagama gaarin, balse ka war-sugaynaa Hay’adda Duulista Hawada Soomaaliya oo Warbixinnada oo dhan ay isugu soo ururi doonaan,” ayuu yiri Colaado.
Mar la weydiiyay su’aal ahayd in baaritaanka socda ay shirkad ahaan ay qayb ku leeyihiin, ayuu ku jawaabay. “Haa… Qayb ayaan ka nahay baaritaanka socda, Waxaa kaloo qayb ka ah shirkadda aan wada-shaqeynta leennahay iyo weliba hay’ado kale oo badan.”
Halkaan Riix oo dhageyso